Cholesterol ကိုလက်စထော ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 5:20 PM | No မှတ်ချက် |
ကိုလက်စထောများနေရင် နှလုံး အတက်ခ်ရစေနိုင်တယ်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းလို့ ရင်ပတ်နာတာ ရစေနိုင်တယ်။ အဆီစားများရင် အဲတာကို သွေးလွှတ်ကြောနံရံမှာလာစုနေလို့ အဲလိုရောဂါတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်များရင် ပိုဖြစ်တယ်။ ကိုယ်လက်လှုတ်ရှားမှုနည်းရင် ပိုဖြစ်တယ်။ မျိုးရိုးအရပါလာတာကိုတော့ ရှောင်မရပါ။ များသူတွေဟာ အရွယ်ရောက်ချိန်ကတည်းက စဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ ကောင်းတဲ့ HDL အမျိုးသမီးတွေထက်နည်းတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ အသက်ရလာရင် ဆိုးတဲ့ LDL တက်လာတယ်။
အမျိုးသမီးအသက်မကြီးသူတွေမှာ ရွယ်တူ ယောက်ျားတွေထက် LDL နည်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ၅၅ ကျော်ရင် ရွယ်တူယောက်ျားတွေထက် များလာတယ်။
အဆီနည်းတဲ့အစားအသောက်နဲ့ ကိုလက်စထောနည်းတဲ့ အစားအသောက် + ကိုယ်လက်လှုတ်ရှားမှု + ကိုယ်အလေးချိန် (လိုအပ်ရင်) လျော့ချတာတွေနဲ့ လူကောင်းလိုနေနိုင်တယ်။ တချို့ကတော့ ဆေးလိုမယ်။
ဘာမှမခံစားရလို့ အသက် ၂ဝ ကျော်သူ ကျား-မတိုင်း စစ်သင့်တယ်။ ကောင်းနေရင်လည်း ၅ နှစ်တခါစစ်သင့်တယ်။ Lipid profile (lipoprotein profile) လို့ ခေါ်တယ်။ ယောက်ျားဆို ၃၅ နှစ်ကျော်ရင်၊ မိန်းမဆိုရင် ၄၅ နှစ်ကျော်ရင် ပိုပြီးခပ်စိပ်စိပ် စစ်သင့်သေးတယ်။ စစ်ရင် -
1. LDL (low-density lipoprotein cholesterol) = ဆိုးတဲ့ကိုလက်စထော၊
2. HDL (high-density lipoprotein cholesterol) = ကောင်းတဲ့ကိုလက်စထော။
တကယ်လို့ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးကြောရောဂါရှိနေရင် LDL ကို 70 ထက် နည်းနေအောင် လုပ်သင့်တယ်။ ဆီးချို နဲ့ တခြားရောဂါရှိနေသူတွေက LDL 100 ထက် နည်းနေသင့်တယ်။ နှလုံးရောဂါ၊ (စထုပ်ခ်)၊ အဖျားပိုင်း သွေးကြောရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိတယ်။ (၁) တသက်လုံးလူနေမှုပုံစံကိုပြောင်းပါ။ (၂) လိုအပ်ရင် ဆေးသောက်ပါ။
လူနေမှုပုံစံကောင်းဆိုတာ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းနေပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့။
- ပြုပြင်ထားတဲအသားတွေ ဥပမာ Sausage ဝက်အူတောင့်၊ Hot dogs (ဟောဒေါ့ခ်)၊ တွေမှာအဆီနဲ့ ဆားများတယ်။ ရှောင်ပါ။
- (မာဂျရင်း) က ထောပတ်ထက် အသင့်စားလို့ရတယ်။
- Statins ဆေးကိုအများဆုံးသုံးတယ်။ ဆေးကြောင့် ဗိုက်နာ၊ လေပွ၊ ဗိုက်နာ၊ ဗိုက်အောင့်၊ ဝမ်းချုပ်၊ အသဲထိခိုက်၊ ကြွက်သားတွေနာ၊ အားယုတ်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Atorvastatin (Lipitor) နဲ့ Rosuvastatin (Crestor) တွေက ပိုပြင်းတယ်။ Fluvastatin (Lescol) က သိပ်မပြင်းဘူး။
- Resins ဆေးကအသည်းကနေ (ကိုလက်စထော) ကိုပိုအသုံးချစေမယ်။ ဒီဆေးကြောင့် ဝမ်းပျက်-ဝမ်းချုပ်၊ ဗိုက်မငြိမ်၊ ခေါင်းမူး၊ လေပွ၊ ရင်ပြည့်၊ ရင်ပူတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
(ကိုလက်စထော) ကျဆေးတွေမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်။ အိပ်ချင်၊ အိပ်ရေးပျက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ပျို့၊ အန်တာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဆေးတွေ တမျိုးကနေနောက်တမျိုး ပြောင်းပေးရတာလဲရှိတယ်။
(ကိုလက်စထော) များနေသူတွေကို ဆေးကုရတာ တယောက်နဲ့ တယောက် မတူပါ။ လူတိုင်းက (ကိုလက်စထော) ကို ထုတ်ပေးနေပြီး ဒါကိုအသုံးပြုနေကြတယ်။ နှစ်နေရာလုံးမှာ မတူကြပါ။ ယောက်ျားတွေနဲ့ မိန်းမတွေကို ဆေးကုရတာ မတူဘူး။ (ကိုလက်စထော) များနေလို့ ချက်ချင်းစိတ် မပျက်ပါနဲ့ အမေရိကားမှာကိုယ်လိုလူမျိုးသန်း ၁ဝဝ ရှိနေတယ်။ ဒီလူတွေက Total cholesterol 200 mg/dLထက် များနေကြတယ်။ သူတို့ကိုဆေးကုတဲ့အခါ နှစ်ယောက်ထပ်တူတယ် ဆိုတာတောင် ရှားတယ်။ ဟော်တယ်တွေ၊ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ မနက်စာအဖြစ်စားသုံးလေ့များတဲ့ ဝက်ပေါင်ခြောက်က အဆီတွေများလို့ ဆိုးစေတယ်။ ချောကလက်ကိတ်မုံ့ကလဲ အတူတူဘဲ။ အရက်ထဲမှာလဲ ကလိုရီ နဲ့ သကြားဓါတ် မနည်းလှဘူး။ Triglyceride levels များစေနိုင်တယ်။
HDL ကောင်းတဲ့ (ကိုလက်စထော) က 60 နဲ့အထက်ရှိနေရင် နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ရာကျတယ်။ ဒီအမျိုးအစား နည်းနေတာဟာ မကောင်းပါ။ ယောက်ျားတွေဆိုရင် 40 mg/dL ထက်နည်းနေရင်၊ မိန်းမတွေဆိုရင် 50 mg/dL ထက် နည်းနေရင် မကောင်းပါ။ အုံးသီးဆံ၊ အုံးရည်တွေမှာ ဆိုးတဲ့ (ကိုလက်စထော) ပါနေမဲ့ Saturated fat တွေပါတယ်။ သစ်ကြားသီးကို အသင့်အတင့်စားပေးပါ။ သူ့ထဲမှာ (ဖိုင်ဘာ) နဲ့ (အိုမီဂါ ၃) တွေပါလို့ဖြစ်တယ်။ ဆိုင်ကနေ အလွယ်ဝယ်ရတဲ့ ခေတ်ပေါ်အစားအစာ၊ သွားရည်စာတွေမှာ ဆားနဲ့ ကိုလက်စထော များတယ်။
• Cholesterol and food ကိုလက်စထောနဲ့ အစားအစာ http://doctortintswe.blogspot.com/…/cholesterol-and-food.ht…
• Saturated Fatty Acids and Health risks ဆီ၊ အဆီနဲ့ ကျန်းမာရေး http://doctortintswe.blogspot.com/…/saturated-fatty-acids-a…
• High Cholesterol diet (ကိုလက်စထော) များလို့ မစားသင့်တဲ့အစားအစာတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/…/high-cholesterol-diet.h…